Tena misy marina ve ny SEO?
Eny, marina izany. Ny SEO optimisma dia mihoatra noho ny tena izy, satria afaka misafidy sy manova ny anaran'ny tranonkalan'ny tranonkala izay afaka manampy anao hahazo ny isa ambony amin'ny Search Engine Optimization. Araka ny fitsapana farany indrindra, ny SEO fanavaozana sehatra dia misy fiantraikany amin'ny fahitana ny tranonkala rehetra. Ahoana anefa? Ary inona ireo zavatra ratsy indrindra tokony hohalavirina? Ireto ny zavatra tokony ho fantatrao.
Alohan'ny zavatra hafa, ny zava-dehibe ny fampitomboana ny anaranao domains na Top-Level Domain (TLD). Tsy ilaina ny milaza fa ny TLDs dot-com dia ny fanitarana tranonkala malaza indrindra hita amin'ny Internet. Raha izaho kosa, dia manaraka fotsiny aho. Ny zavatra dia tsy misy fiantraikany ny TLD anao, na farafaharatsiny mampidi-doza ny fidiran'ny pejy Internet ao amin'ny SERPs. Noho izany, maninona raha mba misafidy zavatra hafa, ohatra, dot-biz na dot-us? Ary ahoana raha mety ho tombontsoa manokana azo avy amin'ny tsirairay?
Saingy tonga ny fampitandremana - ny ampahany sasany amin'ny sehatry ny sehatra dia matetika mifandraika amin'ny fihetsiketsehana na fitrandrahana (ny ankamaroan'ny pejy dot-biz dia ekena ho ambany kalitao, ary noho izany ny tranonkala ambany). Izany no mahatonga ny fifampiraharahana amin'ny TLDs atypical dia mety hisy fiantraikany amin'ny lalao misy anao. Raha ny marina, tsy ilaina ny hampidiran-doza ny tetikasanao an-tserasera hatramin'ny voalohany. Mahatsiarova safidy ary misafidy ny lalana tena tsotra.
Torohevitra fohy sy mora amin'ny seho SEO Optimization
misoroka ny hoe manana tarehimarika amin'ny anaranao anaran-toerana noho ny antony roa: ny tarehimarika diso na ny fampiasana diso ny tarehimarika dia manadino ny traikefan'ny mpampiasa anao tanteraka, Raha ny tarehimarika voarakitra amin'ny anaran'ny sehatra iray dia mety ho fantatry ny motera fikarohana indraindray ho famantarana fanaratsiana;
manadino ny fampiasana teny diso rehetra eran-tany, eny fa na dia toa vahaolana tena miavaka aza ny fanombohana anao. Ankoatra ny SEO, ny famotsorana fifanjevoana be loatra amin'ny fotoana fohy dia hamerina ny zava-drehetra fotsiny;
Aza miezaka ny mifidy ny anaran'ny sehatra mifanaraka amin'izany. Midika izany fa ny fanaovana ny tsara indrindra hahazoana anarana nomena ny lavabe lavalava misy anao na ny teny tena manan-danja indrindra dia hevitra ratsy. Satria ity fandraràna ity dia voarara tamin'ny Google hatramin'ny taona 2012, ary tsy miasa intsony, farafaharatsiny mba hahazoana toerana ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana;
mifampizara teny maro hanamboarana fotoana lava iray dia hevitra tsara, indrindra rehefa voamariky ny anarana marika momba ny raharaham-barotrao. Raha manao izany ianao, ny anjaran'ny liona amin'ny tranokalan-tranonkalanao dia hioroka mivantana avy amin'ny fikarohana. Amin'ny lafiny iray - amin'ny fiheverana fa ny mpanjifa dia mahatsiaro ny raharaham-barotra amin'ny anaran'ny marika. Etsy andaniny kosa, ataovy izay hahazoana antoka fa tsy ho azo tsinontsinoavina na hampiato ny hevi-tsoratry ny fanangonanao vaovao ianao.
misoroka raha mety. Na dia eo aza ny fehezantenin'ny fehezan-teny dia mandeha tsara ao anatin'ny sokajy URL, ny fampiasana azy dia mbola tsy tiana ho an'ny anaran'ny sehatra. Andeha hiatrika izany - misy foana ny fanakianana raha toa ka tonga amin'ny sehatra ho an'ny anaran'ny sehatra marina izany;
ny fohy dia ny anaranao sehatra, ny tsara kokoa. Tazomy fotsiny ny anaranao anaranao ao anatin'ny tarehintsoratra 15, ary aza mandeha lavitra loatra Source .